Korneyl aad ugu dhow Farmaajo oo kursiga ku haystay Fartaag - Caasimada Online
Home Warar Korneyl aad ugu dhow Farmaajo oo kursiga ku haystay Fartaag
Korneyl aad ugu dhow Farmaajo oo kursiga ku haystay Fartaag
Beled-Xaawo (Caasimada Online) – Korneyl Aadan Axmed Xirsi (Aadan Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay kursiga uu ku fadhiyo Senator Cabdillaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, oo ka mid ah Senatorada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya.
“Waxaan doonayaa maantay inaan cod dheer ku iraahdo kursi anigu aan lahaa oo dhac iiga maqnaa baan musharax u ahay, waa kursiga Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag uu ku fadhiyo, oo markii hilbaha la qaybsaday qoys ahaan aniga ii soo raacay,” ayuu yiri Korneyl Aadan Axmed Xirsi, oo aad ugu dhow madaxweyne Farmaajo.
Waxa kale oo uu yiri “Dadka Jubbooyinka waxaan u sheegayaa afar sano iyo afar bilood kurisgaasi waa kii la’idinkula dagaalamayay oo Militariga Kenya lagu garab taagnaa, oo dhulkeena, dadkeena iyo maalkeena lagu baabi’inayay Magaalada Kismaayo iyo inta ka dhaxeyso Doolow. Kursigaas baan u taaganahay anigoo ah Aadan Axmed Xirsi (Rufle).”
“Xukuumadda Soomaaliyeed, Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo Guddiga Doorashooyinka cadaalad baan ka sugeynaa oo kursigaasi isaga ah oo qoyskii lahaana ka maqan, sida aan ku heli karno oo cadaalad ah baa la idinka rabaaa” ayuu yiri Korneyl Aadan Rufle oo Warbaahinta ka soo muuqday.
“Haddii taa ayada ah la waayo waxaan dadka degan Gobolka Gedo uga digayaa waxa loo keenayo ciidamada gafuur culuska ah ee horta leh oo wixii Kismaayo laga rabay Gedo loogu soo raray baan rabaa inaan u sheego dadka Gedo degana” ayuu yiri Korneyl Aadan Rufle.
Aadan Rufle ayaa ka mid ah Saraakiisha fara ku tiriska ee Militariga Soomaaliyeed ee mucaaradsan Jubbaland, wuxuuna aad ugu dhow yahay madaxweynaha Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.